Kitapo mofomamy mafana na mangatsiaka mangatsiaka mofomamy ho an'ny gorodona - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
1050 1060 1070 1100 3003 Taratasy ho an'ny alikaola vita amin'ny alim-borona
4. Ampidiro: 20mm - 1300mm
5. Karazana: Lisitra, Horonan-tsary, Rohy, Disc
6. Ny baiko minitra: 500kgs isaky ny habe
7. Ny fandoavana ny TT na ny LC amin'ny tsy hita maso
Fanodinana ny aliminioma
Aluminium Circle dia azo alaina amin'ny fenitra fanondranana, mandrakotra ny taratasy matevina sy plastika plastika. Farany dia mifototra amin'ny hazo palette hazo / hazo ny alimo Aluminium.
Fampiharana ny Aluminium Circle
Isika dia mandray anjara amin'ny fanomezana ny mpanjifantsika amin'ny faribolan'ny alimo. Io karazana io dia manana kalitao faratampony ary tena ankasitrahana noho ireo refiny marina. Izy io dia atolotra antsika amin'ny endriny isan-karazany sy ny fepetra mifanaraka amin'ny fepetra samihafa amin'ny mpanjifantsika.
Volana: 0.3mm-10 mm
Ambainy: 20 mm-1300 mm
Fanamarinana: SGS, BV, MTC, ISO
Aluminium Content: mihoatra ny 99.5%
Endrika: tavoahangy boribory
3003 h14 kofehy aliminioma, kodiarana Aluminium ho an'ny pans, kodiarana alim-borona, Fonosana Aluminium Deep, kodiarana alim-borona mafana